Axmed Madoobe oo xilka qaaday Wasiirka Amniga Jubbaland (Wareegto) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Axmed Madoobe oo xilka qaaday Wasiirka Amniga Jubbaland (Wareegto)
Ardaan Yare 24 March 2021
Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa xilka ka qaadey Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan) Wasiirkii Amniga Dowlada Jubbaland sida lagu sheegay war goordhaw kasoo baxay madaxtooyada Jubbaland.
Xilka qaadista Cabdirashiid Janan ayaa imanaysa kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in uu heshiis la gaaray dowlada federalka. Wareegtada xil ka qaadista ayaa ku taariiqeysan 20ka bishan Marso oo ah afar maalmood kahor xilliga la baahiyay ee maanta ah.
Cabdirashiid Janan ayaa hore dowlada federalka ugu eedeeysay inuu dambiyo ka galay dalka waxana uu ku dhuumaalaysanayay xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in maanta uu Cabdirashiid Janan imanayo magaalada Beled-xaawo halkaas oo ay tageen ciidamo dhowaan laga dejiyay magaalada Doolow.
Dowladda Federaalka ayaa xabsiga dhigtey Cabdirashiid Janan bishii Augst ee 2019-kii hase yeeshee waxa uu ka baxsaday 1dii September 2019.
Daawo: Danjire Caalim oo baaq u diray dowladda Federalka, kana hadlay muhiimadda Beesha Caalamka leedahay
Cabdirashiid Janan oo gaaray Balad-xaawo lana kulmay Taliyaha NISA